Degaanka iyo dadka ku nool Noorway | Samfunnskunnskap.no
In ka badan shan milyan oo qof ayaa deggan Norwey.
Ku dhawaad boqolkiiba 75 dadku waxey deggan yihiin teedka xeebaha.
MQiyaastii kala badh dadku waxey deggan yihiin Bariga dalka (Østlandet).
Ku dhawaad boqolkiiba 17 dadka dalka deggan waa dad asalkoodu ajaanib (ajaanib iyo carruur noowiiji ah oo ay ajaanib dhaleen). Oslo iyo Drammen waa magaalooyinka ay dadka ugu bada ee asalkoodu yahey jaanibka deggan yihiin.
Halkan ka akhri warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dadka deggan Norwey: www.ssb.no
Norwey waxa jooga bulsho qadiim ah oo la yidhaa Saame, waana kooxda bulsho ee waddankan ugu hor degay. Waxa deggen inta u dhaxaysa 40 000 iyo 50 000 oo saame ah Norwey. Waxa kale ay degan yihiin 50 000 oo same isugeyn Iswiidhan, Finland iyo Ruushka.
Saame waxa ay leeyihiin af u gaar ah – af-saami. Waxa jira af-saame dhawrah oo kala duwan luqad ahaan.
Saame-hu laga bilaabo1989kii waxa ay leeyihiin baarlamaan u gaara saame-ha. Baarlamaanka Saamaha waxa gaar ahaan lagaga doodaa arrimaha sida gaarka ah u khuseeya dadka reer Saamaha ah. Baarlamanka Saamaha waxaa loo asaasey inuu ilaaliyo bulshada dadka Saamaha ee Norwey, wuxuuna metalaa siyaasadooda.
Awoodda baarlamaanka saame-ha wuxu ku xusan yahay sharciga-saame-ha. Sharciga Norwey ayaa qabta sidoo kale bulshada saame-ha sida dadka kale ee jooga Norwey.
Afartii sanno ba mar ayaa la qabtaa doorashada baarlamaanka saame-ha, isla marka la qabanayo doorashada baarlamaanka